What is Metro?(Metronidazole) - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
What is Metro?(Metronidazole)
ဝမျးကိုကျပွီး ဗိုကျနာကာ ဝမျးထဲသှေးပါလြှငျ ကှမျးယာဆိုငျက မကျထရိုတဈလုံးဝယျ သောကျလြှငျ သကျသာနိုငျတယျဆိုတဲ့အတှေးမြိုး လူတျောတျောမြားမြားမှာရှိနကွေပါသညျ။
မကျထရိုသညျ Metranidazole ဆေးကို အတိုစာလုံးအနနှေငျ့သုံးနကွေခွငျးဖွဈပါ သညျ။ Metronidozole သညျဝမျးကိုကျရောဂါသာမက အခွားသော ကုထုံးမြားတှငျ ပါဝငျနိုငျ သောဆေးတဈမယျဖွဈပါသညျ။
Metronidazole သညျ Oxygen မရသျောလညျး အသကျရှငျနိုငျတဲ့ ဘကျတီူရီးယားမြိုး (Anaerobic bacteria)၊ ဆီးနှငျ့မှေးလမျးကွောငျးမှာနသေော ပိုး (Urogenital trichomoniasis) ရောဂါ၊ ဝမျးကိုကျပိုး (Entamoeba histolytica)၊ ဂြီရာဒီရားပိုး (Giardia Lamblia), ဗလနျတီဒီယမျ ကိုလိုငျ၊ (Balantidium Coli) ပလပျစတိုစဈစတကျဟိုမငျနဈ (Blastocystic hominis) မြားကိုတိုကျခိုကျနိုငျစှမျးရှိသော ပိုးသတျဆေးတဈမြိုးဖွဈပါသညျ။ အစှမျးထကျသော ဆေးတဈလကျဆိုတာသိသငျ့ပါသညျ။ ကိုယျရဲ့ ခုခံအား (Immune System) ကို immune Suppressive အာနိသငျပေးနိုငျခွငျး၊ Carcinogenic လညျးဖွဈနိုငျခွငျး ကိုလညျး သိရပါသညျ။ Metro ရဲ့အာနိသငျပေးနိုငျတဲ့ နညျးလမျး Mechanism of action ကိုတော့အပွညျ့အစုံမရေးတော့ပမေယျ့ Metronidazole က ကပျပါးပိုး (Protozoa) နှငျ့ O2 မရဘဲရှငျသနျနိုငျတဲ့ပိုး (anacrobic bacteria) တှကေိုနောကျဆုံး end product က toxic ဖွဈတဲ့ cytotoxic ဖွဈလို့အထကျပါ ပိုးမှား Cell မြားကိုသတျနိုငျတယျလို့ နားလညျထားပါသညျ။
Metronidoxole ကလငျြမွနျစှာနှငျ့ပွညျ့စုံစှာစုပျယူအား (absorption) ကောငျးသော ဆေးဖွဈပါသညျ Plasma ထဲမှာရှိတဲ့ halflife (½ life) ကတော့ တိုပါသညျ။ (၇)နာရီမြှသာ ဖွဈပါသညျ။ ဦးနှောကျရှိ (Cerebrospinal fluid) (CSF) အပါအဝငျ တဈကိုယျလုံးရောကျနိုငျ သော (distribution) ဖွနျ့နိုငျစှမျးလညျးရှိပွီး ဆီးမှတဆငျ့လှယျကူစှာ စှနျ့ထုတျနိုငျပါသညျ။ တခြို့ကိုလညျး ဝမျး(မစငျ) (Feces) ကစှနျ့ထုတျနိုငျပါသညျ။
Entamoeba Histolytica ဆိုတဲ့ amoeba ပိုးကွောငျ့ဖွဈတဲ့ရောဂါကို amoebiasis လို့ ချေါပါသညျ။ amoebiasis ရဲ့ ရောဂါလက်ခဏာဟာ (symptiom) တှကေို metro ကကုသပေး နိုငျပါသညျ။ amoeba ပိုးကောငျ(troplozoite) ကိုသတျနိုငျပါသညျ။ ဆေးသောကျပုံနှုနျး Dose ကိုတော့ ဆရာဝနျမြားက ကွညျ့ပေးပါမညျ။ လူနာအနနှေငျ့ အနညျးဆုံး (၇)ရကျမှ ၁၀ ရကျ အထိ သောကျသငျ့ပါသညျ။
Metronidazole သညျ ဆီးနှငျ့မှေးလမျးကွောငျးမှဖွဈတတျတဲ့ trichomonas ပိုးတှယျ ခွငျး (urogenital trichomoniasis) ရောဂါအတှကျ အဓိကကသြော ဆေးအနနှေငျ့သုံးပါ သညျ။ ဆေးကို (၇)ရကျခနျ့ပေးလြှငျရသလို တဈရကျတညျးဆေး gram မြားမြားကို စှဲ၍ပေး နိုငျပါသညျ။ ဤကဲ့သို့ ကုသရာတှငျ လူနာနှငျ့လိငျဆကျဆံဘကျ (Sexual partner)ကို ပါကုသငျ့ပါသညျ။ လူနာအနနှေငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျနပေါက ပထမ(၃)လ (First Trimester) ကြျောတဲ့အထိ စောငျ့ဆိုငျးပွီးမှ ဒီဆေးကို ပေးရပါသညျ။
ပါးဆောငျမှာ အနာပေါကျခွငျး (cancrum oris) သှားဖုံးမြားအနာဖွဈခွငျး(acute w\_uleerative gingivitis)၊ ခွထေောကျအနာမြား (phagedenic led uleer) တို့တှငျလညျး သုံးနိုငျပါသညျ။
ဝမျးရောဂါတဈမြိုးဖွဈတဲ့ Giadiasis တှငျလညျး Metronidazole (၅)ရကျမြှပေးလြှငျ သကျသာနိုငျပါသညျ။
Oxygen မရဘဲ ပေါကျဖှားနိုငျသောပိုး (anerobic unifection) ရောဂါကို Metronidazole ကအာနိသငျကောငျးကောငျးပွနိုငျပါသညျ။ ခှဲစိပျခံပွီးမှဖွဈတဲ့ ပိုးတှယျခွငျး (post operative infection )ဥပမာ အူအတကျပေါကျတာဖွတျခွငျး (appendicetomy) အူမကွီးနှငျ့အစာဟောငျးအိမျ ခှဲစိပျခွငျး (colorectal surgery) ပိုကျကနေ သားအိမျထုတျ ခွငျး သစညျတို့မှာ infection ကိုကာကှယျဘို့ Metronidazole ကို Drip အနနှေငျ့ပေးနိုငျပါသညျ။ Bacteria ပိုးမြား အခွားသောပိုးသတျဆေး (antibiotic) နှငျ့အခွအေနမေထူးပါက metronidazole ကိုပေးနိုငျပါသညျ။ metronidazole အနနှေငျ့ ပွညျတညျနာ (absecses) နှငျ့ ပကျြစီးနသေောအသားမြား (neerotic tissue) ထအထိဝငျရောကျနိုငျပါသညျ။
အူမကွီးရောဂါတဈမြိုးဖွဈတဲ့ Pseudomembranous colitis ကိုလညျး metronidazole နှငျ့ကုနိုငျပါသညျ။
အစာအိမျရောဂါ (Peptic ulcer) ကုထုံးမြားတှငျ metronidazole ကိုပါ ထညျ့သှငျး သုံးကွတာတှရေ့ပါသညျ။ အစာအိမျမှာအနာဖွဈခွငျးသညျ အစာခကျြရညျ (acid) အစာအိမျ မှအထှကျမြားပွီး အစာအိမျ (Stomach) ၏ နံရံမြားကိုတိုကျစားမှုကွောငျ့ဖွဈသညျ။ မူလက လကျခံထားပါသညျ။ သိပ်ပံပညာရှငျမြားရှာဖှတှေရှေိ့ခကျြအရ H-pylori ဆိုတဲ့ပိုးကွောငျ့ peptic ulcer ဖွဈသညျဟု ယူဆလိုခြိနျတှငျ metoridazole သညျ H-Pylori ကိုတိုကျနိုငျသညျဟု လကျခံလာကွာပွီး Metronidazole နှငျ့ Auoxil တို့ကို Peptic ulcer ကုထုံးတှငျသုံးလာကွ ပါသညျ။
အခွားသုံးနိုငျသောနရောအမြားအပွားရှိပါသေးသညျ။ Bolantidiasis trichomonas vaginitis, Gardnerella vaginitis တို့တှငျလညျး metronidazole ကိုသုံးနိုငျပါသညျ။
Metoridazole အနနှေငျ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုး (side effect) သိပျမမြားတာတှနေို့ငျ သညျ။ တခြို့တလေ ခံတှငျးပကျြခွငျး (metallic bilter, unpleasant taste)၊ ဆီးမညျးမညျး သှားခွငျး (dark coloured urine) ရနိုငျပါသညျ။ အစာအိမျအူသိမျလမျးကွောငျး GIT မှာမစား ခငျြမသောကျခငျြခွငျး (anorexia) ပြို့ခွငျး (nausea)၊ အံခွငျး (vemiting)၊ ဝမျးပကျြခွငျး၊ (diarrhoeo)၊ ရငျဝရငျခေါငျးအောငျ့ခွငျး (epigatric pain) ဗိုကျနာခွငျး (abdominal cramp) လြှာထူခွငျး (furred tongue)၊ လြှာရောငျခွငျး (glossitis) ပါးစပျရောငျခွငျး၊ (stomatitis) တို့ ရနိုငျပါသညျ။ ဦးနှောကျပိုငျး (CNS) အနနှေငျ့ ခေါငျးကိုကျခွငျး (headache)၊ အိပျမပြျောခွငျး (insomaia)၊ လမျးလြှောကျမမှနျခွငျး (ataxic) ခေါငျးမရှငျးခွငျး (dissiuess) သစညျတို့ဖွဈနိုငျ ပါသညျ။
ဒီလိုအသုံးမြားသောဆေးအတှကျ အခွားဆေးနှငျ့တှဲပေးလြှငျ သငျ့မသငျ့ (drug interaction) ကိုသိသငျ့ပါသညျ။ metronidazole မှ အရကျဖွတျဆေးဖွဈတဲ့ Disulfiram နှငျ့ ပုံစံတူသောသဘောကွောငျ့ အရကျသောကျသူမြားနှငျ့အဆငျမပွလှေပါ။ ဆေးမသောကျခငျ (၂၄)နာရီက အရကျ (aclcohol) ကိုဖွတျသငျ့ပါသညျ။ နောကျဆုံးအကွိမျဆေးသောကျပွီး ၄၈ နာရီကွာသောအခါမှ အရကျကိုပွနျသောကျသငျ့ပါသညျ။
Metronidagole ကသှေးကြဲဆေးဖွဈတဲ့ Coumarin ရဲ့ အာနိသငျကိုရှညျစနေိုငျ ပါသညျ။ Phenobarbitone နှငျ့ Phenytoin တို့နှငျ့ရောပေးပါက metroကိုမွနျမွနျစှနျ့ထုတျ နိုငျသညျ။ Cimetidine နှငျ့တှဲပေးလြှငျ metro အာနိသငျရှညျနိုငျပါသညျ။
Metronidazole ကို မသုံးသငျ့တဲ့အခွအေနေ (contraindication) မြားက ကိုယျဝနျ ဆောငျမြား(Pregnancy) နို့တိုကျမိခငျမြား (lactating matter) အသဲ မကောငျးသူမြား (Liver impairment) ကိုမသုံးသငျ့ကွောငျ့သိရပါသညျ။
အလှယျတကူဝယျလို့ရနတေဲ့ metro ကိုအမြားပွညျသူလှယျလငျ့တကူ တနျဘိုးသိစေ ရနျ ရေးလိုကျခွငျးဖွဈပါသညျ။
ဝမ်းကိုက်ပြီး ဗိုက်နာကာ ဝမ်းထဲသွေးပါလျှင် ကွမ်းယာဆိုင်က မက်ထရိုတစ်လုံးဝယ် သောက်လျှင် သက်သာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုး လူတော်တော်များများမှာရှိနေကြပါသည်။
မက်ထရိုသည် Metranidazole ဆေးကို အတိုစာလုံးအနေနှင့်သုံးနေကြခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ Metronidozole သည်ဝမ်းကိုက်ရောဂါသာမက အခြားသော ကုထုံးများတွင် ပါဝင်နိုင် သောဆေးတစ်မယ်ဖြစ်ပါသည်။
Metronidazole သည် Oxygen မရသော်လည်း အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ ဘက်တီူရီးယားမျိုး (Anaerobic bacteria)၊ ဆီးနှင့်မွေးလမ်းကြောင်းမှာနေသော ပိုး (Urogenital trichomoniasis) ရောဂါ၊ ဝမ်းကိုက်ပိုး (Entamoeba histolytica)၊ ဂျီရာဒီရားပိုး (Giardia Lamblia), ဗလန်တီဒီယမ် ကိုလိုင်၊ (Balantidium Coli) ပလပ်စတိုစစ်စတက်ဟိုမင်နစ် (Blastocystic hominis) များကိုတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိသော ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အစွမ်းထက်သော ဆေးတစ်လက်ဆိုတာသိသင့်ပါသည်။ ကိုယ်ရဲ့ ခုခံအား (Immune System) ကို immune Suppressive အာနိသင်ပေးနိုင်ခြင်း၊ Carcinogenic လည်းဖြစ်နိုင်ခြင်း ကိုလည်း သိရပါသည်။ Metro ရဲ့အာနိသင်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း Mechanism of action ကိုတော့အပြည့်အစုံမရေးတော့ပေမယ့် Metronidazole က ကပ်ပါးပိုး (Protozoa) နှင့် O2 မရဘဲရှင်သန်နိုင်တဲ့ပိုး (anacrobic bacteria) တွေကိုနောက်ဆုံး end product က toxic ဖြစ်တဲ့ cytotoxic ဖြစ်လို့အထက်ပါ ပိုးမွှား Cell များကိုသတ်နိုင်တယ်လို့ နားလည်ထားပါသည်။
Metronidoxole ကလျင်မြန်စွာနှင့်ပြည့်စုံစွာစုပ်ယူအား (absorption) ကောင်းသော ဆေးဖြစ်ပါသည် Plasma ထဲမှာရှိတဲ့ halflife (½ life) ကတော့ တိုပါသည်။ (၇)နာရီမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဦးနှောက်ရှိ (Cerebrospinal fluid) (CSF) အပါအဝင် တစ်ကိုယ်လုံးရောက်နိုင် သော (distribution) ဖြန့်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပြီး ဆီးမှတဆင့်လွယ်ကူစွာ စွန့်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ တချို့ကိုလည်း ဝမ်း(မစင်) (Feces) ကစွန့်ထုတ်နိုင်ပါသည်။
Entamoeba Histolytica ဆိုတဲ့ amoeba ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါကို amoebiasis လို့ ခေါ်ပါသည်။ amoebiasis ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာဟာ (symptiom) တွေကို metro ကကုသပေး နိုင်ပါသည်။ amoeba ပိုးကောင်(troplozoite) ကိုသတ်နိုင်ပါသည်။ ဆေးသောက်ပုံနှုန်း Dose ကိုတော့ ဆရာဝန်များက ကြည့်ပေးပါမည်။ လူနာအနေနှင့် အနည်းဆုံး (၇)ရက်မှ ၁၀ ရက် အထိ သောက်သင့်ပါသည်။
Metronidazole သည် ဆီးနှင့်မွေးလမ်းကြောင်းမှဖြစ်တတ်တဲ့ trichomonas ပိုးတွယ် ခြင်း (urogenital trichomoniasis) ရောဂါအတွက် အဓိကကျသော ဆေးအနေနှင့်သုံးပါ သည်။ ဆေးကို (၇)ရက်ခန့်ပေးလျှင်ရသလို တစ်ရက်တည်းဆေး gram များများကို စွဲ၍ပေး နိုင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ကုသရာတွင် လူနာနှင့်လိင်ဆက်ဆံဘက် (Sexual partner)ကို ပါကုသင့်ပါသည်။ လူနာအနေနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေပါက ပထမ(၃)လ (First Trimester) ကျော်တဲ့အထိ စောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ဒီဆေးကို ပေးရပါသည်။
ပါးဆောင်မှာ အနာပေါက်ခြင်း (cancrum oris) သွားဖုံးများအနာဖြစ်ခြင်း(acute w\_uleerative gingivitis)၊ ခြေထောက်အနာများ (phagedenic led uleer) တို့တွင်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။
ဝမ်းရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Giadiasis တွင်လည်း Metronidazole (၅)ရက်မျှပေးလျှင် သက်သာနိုင်ပါသည်။
Oxygen မရဘဲ ပေါက်ဖွားနိုင်သောပိုး (anerobic unifection) ရောဂါကို Metronidazole ကအာနိသင်ကောင်းကောင်းပြနိုင်ပါသည်။ ခွဲစိပ်ခံပြီးမှဖြစ်တဲ့ ပိုးတွယ်ခြင်း (post operative infection )ဥပမာ အူအတက်ပေါက်တာဖြတ်ခြင်း (appendicetomy) အူမကြီးနှင့်အစာဟောင်းအိမ် ခွဲစိပ်ခြင်း (colorectal surgery) ပိုက်ကနေ သားအိမ်ထုတ် ခြင်း သစည်တို့မှာ infection ကိုကာကွယ်ဘို့ Metronidazole ကို Drip အနေနှင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ Bacteria ပိုးများ အခြားသောပိုးသတ်ဆေး (antibiotic) နှင့်အခြေအနေမထူးပါက metronidazole ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ metronidazole အနေနှင့် ပြည်တည်နာ (absecses) နှင့် ပျက်စီးနေသောအသားများ (neerotic tissue) ထအထိဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။
အူမကြီးရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Pseudomembranous colitis ကိုလည်း metronidazole နှင့်ကုနိုင်ပါသည်။
အစာအိမ်ရောဂါ (Peptic ulcer) ကုထုံးများတွင် metronidazole ကိုပါ ထည့်သွင်း သုံးကြတာတွေ့ရပါသည်။ အစာအိမ်မှာအနာဖြစ်ခြင်းသည် အစာချက်ရည် (acid) အစာအိမ် မှအထွက်များပြီး အစာအိမ် (Stomach) ၏ နံရံများကိုတိုက်စားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ မူလက လက်ခံထားပါသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရ H-pylori ဆိုတဲ့ပိုးကြောင့် peptic ulcer ဖြစ်သည်ဟု ယူဆလိုချိန်တွင် metoridazole သည် H-Pylori ကိုတိုက်နိုင်သည်ဟု လက်ခံလာကြာပြီး Metronidazole နှင့် Auoxil တို့ကို Peptic ulcer ကုထုံးတွင်သုံးလာကြ ပါသည်။
အခြားသုံးနိုင်သောနေရာအများအပြားရှိပါသေးသည်။ Bolantidiasis trichomonas vaginitis, Gardnerella vaginitis တို့တွင်လည်း metronidazole ကိုသုံးနိုင်ပါသည်။
Metoridazole အနေနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (side effect) သိပ်မများတာတွေ့နိုင် သည်။ တချို့တလေ ခံတွင်းပျက်ခြင်း (metallic bilter, unpleasant taste)၊ ဆီးမည်းမည်း သွားခြင်း (dark coloured urine) ရနိုင်ပါသည်။ အစာအိမ်အူသိမ်လမ်းကြောင်း GIT မှာမစား ချင်မသောက်ချင်ခြင်း (anorexia) ပျို့ခြင်း (nausea)၊ အံခြင်း (vemiting)၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ (diarrhoeo)၊ ရင်ဝရင်ခေါင်းအောင့်ခြင်း (epigatric pain) ဗိုက်နာခြင်း (abdominal cramp) လျှာထူခြင်း (furred tongue)၊ လျှာရောင်ခြင်း (glossitis) ပါးစပ်ရောင်ခြင်း၊ (stomatitis) တို့ ရနိုင်ပါသည်။ ဦးနှောက်ပိုင်း (CNS) အနေနှင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း (headache)၊ အိပ်မပျော်ခြင်း (insomaia)၊ လမ်းလျှောက်မမှန်ခြင်း (ataxic) ခေါင်းမရှင်းခြင်း (dissiuess) သစည်တို့ဖြစ်နိုင် ပါသည်။
ဒီလိုအသုံးများသောဆေးအတွက် အခြားဆေးနှင့်တွဲပေးလျှင် သင့်မသင့် (drug interaction) ကိုသိသင့်ပါသည်။ metronidazole မှ အရက်ဖြတ်ဆေးဖြစ်တဲ့ Disulfiram နှင့် ပုံစံတူသောသဘောကြောင့် အရက်သောက်သူများနှင့်အဆင်မပြေလှပါ။ ဆေးမသောက်ခင် (၂၄)နာရီက အရက် (aclcohol) ကိုဖြတ်သင့်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအကြိမ်ဆေးသောက်ပြီး ၄၈ နာရီကြာသောအခါမှ အရက်ကိုပြန်သောက်သင့်ပါသည်။
Metronidagole ကသွေးကျဲဆေးဖြစ်တဲ့ Coumarin ရဲ့ အာနိသင်ကိုရှည်စေနိုင် ပါသည်။ Phenobarbitone နှင့် Phenytoin တို့နှင့်ရောပေးပါက metroကိုမြန်မြန်စွန့်ထုတ် နိုင်သည်။ Cimetidine နှင့်တွဲပေးလျှင် metro အာနိသင်ရှည်နိုင်ပါသည်။
Metronidazole ကို မသုံးသင့်တဲ့အခြေအနေ (contraindication) များက ကိုယ်ဝန် ဆောင်များ(Pregnancy) နို့တိုက်မိခင်များ (lactating matter) အသဲ မကောင်းသူများ (Liver impairment) ကိုမသုံးသင့်ကြောင့်သိရပါသည်။
အလွယ်တကူဝယ်လို့ရနေတဲ့ metro ကိုအများပြည်သူလွယ်လင့်တကူ တန်ဘိုးသိစေ ရန် ရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Birth Control Pill Failure
Htet Arkar Kyaw
ဂနိုမှာ မက်ထရိုမပေးပါဘူး အခြားပိုးသတ်ဆေးပေးတယ် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဂနိုဆိုတာသေချာမှဆရာဝန် ညွှန်ကြားတဲ့ပိုးသတ်ဆေးသောက်ပါ။ Visit to My Doctor Facebook https://www.facebook.com/MyDoctorMyanmar/